BYD သည် Shaoxing ဘက်ထရီ ထုတ်လုပ်မှု အခြေစိုက်စခန်း ၏တိုးတက် မှုကို ထုတ်ဖော်ပြသ ခဲ့သည် - Pandaily
BYD သည် Shaoxing ဘက်ထရီ ထုတ်လုပ်မှု အခြေစိုက်စခန်း ၏တိုးတက် မှုကို ထုတ်ဖော်ပြသ ခဲ့သည်
Jun 15, 2022, 11:29မနက် 2022/06/15 14:17:49 Pandaily
တရုတ် လျှပ်စစ် ကား ထုတ်လုပ်သူ BYD က အင်္ဂါနေ့က ထုတ်ဖော် ပြောကြားခဲ့သည်စွမ်းအင် စွမ်းအင် ဘက်ထရီ ထုတ်လုပ်မှု အခြေစိုက်စခန်း အသစ် တည်ဆောက်ခြင်း တိုးတက်မှုShaoxing, Zhejiang မှာ ။ စီမံကိန်း ၏စုစုပေါင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မှာယွမ် ၁၃ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁. ၉၃ ဘီလီယံ) ဖြစ်ပြီး 18 က ၁၈၀၀ (၁. ၂ စတုရန်းကီလိုမီတာ) ကျယ်ဝန်း ပြီး နှစ်စဉ် ထုတ်လုပ်မှု တန်ဖိုး မှာယွမ် ဘီလီယံ ၂၀ ထက်ကျော်လွန် မည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။
BYD ၏ဥက္က chairman ္ဌ နှင့် ဥက္က president ္ဌ Wang Chuanfu က Shaoxing သည် စွမ်းအင် ယာဉ် အသစ်များ ကိုမြှင့်တင်ရန် ပထမဆုံး မြို့တစ်မြို့ အနေဖြင့် ကြီးမားသော အားသာချက်များ ရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ဝမ် ကပြောကြား သည်မှာ စွမ်းအင် ဘက်ထရီ ထုတ်လုပ်မှု အခြေစိုက်စခန်း စတင် ချိန်မှ ၁၀ လခ န့် သာ ကြာမြင့် ခဲ့ပြီး မြို့နှင့် အုပ်စု အပေါ် ကြီးမားသော အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိ လိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ဤစီမံကိန်း သည် Zhejiang တွင် BYD ၏အကြီး မား ဆုံး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နှင့် ထုတ်လုပ်မှု တန်ဖိုး အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ ပထမအဆင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မှာယွမ် ၇ ဘီလီယံ ဖြစ်သည်။ ၄ င်းတို့ အနက် နှစ်စဉ် 15GWh blade battery စီမံကိန်းအတွက် ယွမ် ၆ ဘီလီယံ ကိုအသုံးပြု လိမ့်မည်။
၂၀၂၀ တွင် BYD သည် FinDreams Batteries ဟုခေါ်သော လက်အောက်ခံ ကုမ္ပဏီ တစ်ခု နှင့်အတူ ဘက်ထရီ လုပ်ငန်း ကိုစတင် ပေါင်းစည်း ခဲ့သည်။ ယခုနှစ်တွင် FAW နှင့် BYD တို့ သည်ယွမ် ၁၃. ၅ ဘီလီယံ ကိုပူးတွဲ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ခဲ့ပြီး ၄၉ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ၅၁ ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီး ပိုင်ဆိုင် ကာ စွမ်းအင် ဘက်ထရီ များ ထုတ်လုပ်ရန် FAW Fudi New Energy Technology Co., Ltd. ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ အစီအစဉ် အရ နှစ်စဉ် လျှပ်စစ် ကား ၆၀၀, ၀၀၀ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်သည်။
လောင်စာဆီ ယာဉ် များ ထုတ်လုပ်မှုကို လုံးဝ ရပ်ဆိုင်း မည်ဟု ယခင်က ကြေငြာ ခဲ့သော BYD သည် ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင် စျေးကွက် တန်ဖိုး ယွမ် ထရီလီယံ ကျော်လွန် ခဲ့ပြီး A-share ကား ကုမ္ပဏီ ၏ပထမဆုံး မှတ်တိုင် တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၎င်း ၏ဘဏ္ report ာရေး အစီရင်ခံစာအရ ယခုနှစ် ပထမ သုံးလပတ် အတွက် စုစုပေါင်း ၀ င်ငွေ မှာယွမ် ၆၆. ၈ ၂၅ ဘီလီယံ ဖြစ်သည်။ တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၆၃. ၀ ၂% တိုးလာပြီး အသားတင် အမြတ် မှာယွမ် ၈ ၀၈ သန်း ဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်လျှင် ၂၄၀. ၅၉% တိုးတက်ခဲ့သည်။ ပထမ သုံးလပတ်တွင် စွမ်းအင် ယာဉ် အသစ် ၂ ၈၆, ၃၀၀ ကို ရောင်းချ ခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၄ ၂၃ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ခဲ့သည်။
ထို့အပြင် BYD သည် ရှယ်ယာ ပြန်လည် ၀ ယ်ယူ မှု ပြီးဆုံး ကြောင်း အင်္ဂါနေ့က ကြေငြာခဲ့သည်။ ပြန်လည် ၀ ယ်ယူ ထားသော အစုရှယ်ယာ များအားလုံးကို ၀ န်ထမ်း အစုရှယ်ယာ ပိုင်ဆိုင်မှု အစီအစဉ် တွင်အသုံးပြု မည်ဖြစ်ပြီး စျေး နှုန်းမှာ ရှယ်ယာ တစ်စု လျှင် ၀ ယွမ် ဖြစ်သည်။ ၀ န်ထမ်း ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကြီးကြပ် ရေးမှူး များ၊ အကြီးတန်း မန်နေဂျာ များ၊ အလယ်အလတ် မန်နေဂျာ များနှင့် BYD ၏အဓိက ကျောရိုး ၀ န်ထမ်း များအပါအ ၀ င် အစီအစဉ် အတွက် အရည်အချင်းပြည့်မီ သော ၀ န်ထမ်း အရေအတွက်မှာ ၁၂၀၀၀ ထက်မ ကျော်လွန် ပါ။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:BYD သည်ယွမ် ၄ ၃၃ သန်း ဖြင့် ကုမ္ပဏီ ၏ရှယ်ယာ ၁. ၄၅ သန်း ကိုပြန်လည် ဝယ်ယူ ရန်စီစဉ် ထားသည်